घलेम्दी हाइड्रोको आइपीओमा पहिलो दिनमै ६ करोड १० लाखको पर्यो आवेदन, कतिले भरे ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home आर्थिक घलेम्दी हाइड्रोको आइपीओमा पहिलो दिनमै ६ करोड १० लाखको पर्यो आवेदन, कतिले...
घलेम्दी हाइड्रोको आइपीओमा पहिलो दिनमै ६ करोड १० लाखको पर्यो आवेदन, कतिले भरे ?
१९ पुष २०७५, बिहीबार १८:३०
घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडको आइपीओमा पहिलो दिन ६ करोड १० लाख ४० रुपैयाँको आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक भिबोर क्यापिटलका बिजनेस हेड पवन रेग्मीका अनुसार अपरान्ह ४.३० बजेसम्ममा ७ हजार ८८२ जनाले ६ लाख १० हजार ४० कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् । यो तथ्यांकले घलेम्दीको आइपीओ भर्न लगानीकर्ता उत्साहित भएको देखाउँछ ।
कम्पनीले बिहीबार (पुस १९ गते) देखि सर्वसाधारणलाई आइपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कुल १५ लाख ३३ हजार ७७० कित्ता आइपीओ सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरेको हो । जसमा २२ हजार कित्ता सेयर कम्पनीका कर्मचारी र ५५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ ।
यो आइपीओमा पुस २३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यस अवधिमा सबै सेयर नबिकेमा माघ १८ गतेसम्म भर्न पाउने व्यवस्था छ । यसमा सी–आस्वा प्रणालीबाट आवेदन दिन सकिन्छ । न्यूनतम ५० कित्तादेखि १० हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । घलेम्दीको आइपीओलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले कमजोर आधार जनाउने ‘ग्रेड ५’ रेटिङ दिएको छ । यसको जारी पुँजी ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
घलेम्दीले म्याग्दीको घलेम्दी खोलामा ५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कुल लागत १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसको प्रतिमेगावाट लागत २३ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७७। ७८ बाट लाभांश दिने सकिने जनाएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा ८५ रुपैयाँ ९० पैसा र आव २०७७।७८ मा ९६ रुपैयाँ ५२ पैसा हुने प्रक्षेपण छ । यस्तै, प्रतिसेयर आम्दानी आव २०७७।७८ मा ६ रुपैयाँ ७४ पैसा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
५५ करोड रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको आयोजनामा संस्थापकको ३८ करोड ५० लाख (७०%) लगानी रहेको छ । यसमा स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको गरी १६ करोड ५० लाख (३०%) रुपैयाँ लगानी रहनेछ । ५ मेगावाटको यो आयोजना म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा निमार्ण भइरहेको छ । ९०% प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणको काम सकेको यस आयोजनाले आगामी फागुनमा विद्युत उत्पादनको तयारी गरेको छ । २०७१ देखि सुरु भएको यस आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिमेगावाट लागत २३ करोड रुपैयाँ पर्ने यो आयोजनाले ८ वर्षमा कर्जा चुक्ता गर्ने जनाएको छ ।nepalipaisa.com
Previous articleम्याग्दी मगर समाज काठमाडौँले माघे संक्रान्ति मेला गर्ने
Next articleयूवापुस्ताले रुचाए ‘उखान यूद्ध’